मुख्य खबर Archives - Page 232 of 376 - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्न बैठक शुरु
९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सीट बाँडफाँटको अन्तिम कसरत शुरु भएको छ । सीट बाँडफाँटका लागि गठन गरिएको कार्यदलको बैठक बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा शुरु भएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बिमलेन्द्र निधी, मिनेन्द्र रिजाल, पूर्णबहादुर...
फोरम अध्यक्ष यादवले सप्तरी – २ मा जित्लान ?
काठमाडौं, ९ कार्तिक। संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । फोरम नेपालका नेताहरुले अध्यक्ष यादव सप्तरी–२ बाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको बताएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा...
बाबुराम र नारायणकाजीको भीडन्त रोचक बन्दै
२०७४ कात्तिक ७ मंगलवार
काठमाडौं, ७ कार्तिक । मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा रोचक भीडन्त गोरखामा हुने भएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सबैभन्दा हेभ्भी वेटको भीडन्त पनि गोरखामा नै हुने भएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा...
जाजरकोटमा वागी उम्मेद्वारले लिए नाम फिर्ता, पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतलाई राहत
काठमाडौं । जाजरकोटमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ट नेता एवंम् पुर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतविरुद्ध वागी उम्मेदवारी दिने एमाले नेता गोविन्द्र विक्रम शाहले उम्मेवारी फिर्ता लिने भएका छन् । राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेता शाहले पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिने भएका हुन ।...
माओवादी नेता बादल नवलपुर १ को उम्मेदवार !
काठमाडौं । २३ भदौ ०७४ मा प्रचण्डले चितवनमा पत्रकारहरुमाझ प्रतिनिधिसभा चुनावमा आफू लड्ने निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो पटक सार्वजनिक खुलासा गरेका थिए । उनले. भनेका थिए, ‘वीरगञ्ज बैठकले म चितवनबाट चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’ प्रदेश २ को स्थानीय चुनावलाई...
« 1 … 231 232 233 … 376 »